Maamulayaasha warshadaha socdaalku waxay sii ahaanayaan kuwo ay ka go'an tahay deegaanka iyo waaritaanka
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Maamulayaasha warshadaha socdaalku waxay sii ahaanayaan kuwo ay ka go'an tahay deegaanka iyo waaritaanka
Iyadoo ay jirto sawirkan isku dhafan, maamulayaashu waxay u muuqdaan inay u maleynayaan in socdaalku uu ka fiicnaanayo qaybaha kale marka ay timaaddo dhimista qiiqa gaaska aqalka dhirta lagu koriyo.
Iyadoo hoggaamiyeyaasha dunidu ay ku kulmayaan Glasgow COP26, shirka sannadlaha ah ee isbeddelka cimilada ee Qaramada Midoobay, cilmi-baaris ay maanta (Isniin 1 Noofambar) soo saartay WTM London, waxay xaqiijinaysaa in madaxda sare ee warshadaha socdaalku ay ka go'an tahay deegaanka iyo waaritaanka.
Ajendaha COP26 ee sanadkan waxa uu dejin doonaa yoolka dhimista 2030 kaas oo taageeri doona in la gaadho qiiqa kaarboon eber badhtamaha qarniga. Waddamada iyo wada-hawlgalayaasha ganacsiga gaarka ah ayaa sidoo kale ka wada hadli doona sidii loo ilaalin lahaa bulshooyinka iyo deegaannada dabiiciga ah. WTM London waxa ay safka hore kaga jirtay dalxiiska masuulka ah oo waara muddo sanado ah waxana ay lahayd barnaamij u go'ay dalxiiska masuulka ah dhacdo kasta ilaa 1994.
Sannadkan, Warbixinta Warshadaha WTM waxay waydiisay ku dhawaad ​​700 oo xirfadlayaal ah oo ka kala yimid adduunka oo dhan, iyo sidoo kale 1000 socdaalayaal UK ah, wax ku saabsan dabeecadahooda sii jiritaankooda iyo ilaa xadka ay ka ciyaareyso hannaankooda go'aan qaadashada.
Jawaabaha xirfadlayaasha waxay soo jeedinayaan in warshadaha socdaalku ay si dhab ah u qaadanayaan mas'uuliyadahooda, maaha oo kaliya deegaanka dabiiciga ah laakiin sidoo kale ilbaxnimada aadanaha. In ka badan afar-meeloodba (27%) ayaa sheegay in sii jiritaanku yahay mudnaanta koowaad, iyada oo 43% dheeraad ah ay sheegeen in ay ku jirto saddexda sare.
Ku dhawaad ​​shantii qofba (22%) way ogyihiin muhiimada sii jiritaankeeda laakiin ha ku darin saddexda sare. In ka yar tobankiiba hal (7%) ayaa qirtay in aanay hadda qayb ka ahayn fikirkooda ganacsi.
Maamulayaasha sare ee warshadaha ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday in masiibadani ay keentay sii jiritaankeeda ajandaha. Ku dhawaad ​​lix ka mid ah tobankiiba (59%) ayaa sheegay in sii jiritaanku uu noqday mudnaantii ugu sarraysay intii lagu jiray masiibada, iyada oo mid ka mid ah afartiiba ay intaas ku dartay in ay ahayd mudnaanta ugu sarreysa ka hor inta aan cudurka dillaacin oo ay sidaas tahay.
Sanadihii la soo dhaafay WTM London iyo la-hawlgalayaasheeda dalxiiska ee mas'uul ka ah waxay ahaayeen qalab si loo hubiyo in wada hadalka ku saabsan dalxiiska waara oo mas'uul ka ah inuu ka gudbo xaaladda degdegga ah ee cimilada oo ay ku jiraan fursadaha siman ee goobta shaqada, mushaharka saxda ah iyo xaaladaha, caafimaadka, waxbarashada, awoodsiinta gabdhaha, hoos u dhac ku yimid. sinnaan la'aanta iyo ka badan.
Tusaale ahaan, WTM waxay aasaastay Just a Drop 1998-kii, hay'ad samafal oo u heellan inay keento biyo la cabbo oo nadiif ah iyo fayadhowr bulshooyinka u baahan taasoo caawisay ku dhawaad ​​laba milyan oo qof oo adduunka ah.
Si kastaba ha ahaatee, saamaynta socdaalku ku leeyahay meeraha waxa inta badan lagu qaabeeyaa agagaarka gaaska aqalka dhirta lagu koriyo ee ka soo baxa duulista. Dejinta kaarboonku waa hal hab oo arrintan wax looga qabanayo - dadka safarka ah iyo alaab-qeybiyeyaasha ayaa fursad u helaya inay lacag caddaan ah ugu deeqaan hay'adaha ku bixin doona lacagta mashaariicda taas oo ka saaraysa qiiqa ka imanaya duulimaadkooda. Dejinta kaarboon, si kastaba ha ahaatee, kama maqna dhaleecaynteeda iyo socotada laftooda, iyo sidoo kale qaar ka mid ah ololayaasha deegaanka, ayaa weli ah in la qanciyo.
Jawaabaha in ka badan 1,000 socdaalayaal British ah oo loogu talagalay Warbixinta Warshadaha WTM ayaa daaha ka qaaday in afar ka mid ah tobankiiba ay sheeganayaan inay isticmaaleen kaarboonka - 8% waxay sheegeen inay dhaafeen duullimaad kasta iyadoo 15% ay sidaas samaynayaan inta badan, 16% mararka qaarkood. Iyada oo saddex-meeloodba mid ka mid ah ay si firfircoon u diidaan inay joojiyaan duullimaadyada marka la siiyo fursad ay sidaas ku sameeyaan, natiijada saafiga ah ayaa wax yar u wanaagsan kabitaanka.
Si kastaba ha ahaatee, 24% soo hadhay ayaa ku jawaabay in aanay xitaa garanayn waxa ka dhigan tahay kaarboonka, iyaga oo soo jeedinaya in shirkado gaar ah iyo warshadaha safarka ee ballaaran ay u baahan yihiin inay si cad u gudbiyaan aragtida iyo dhaqanka ka-hortagga kaarboonka. Shirkadaha diyaaradaha, isku-dariyeyaasha, online-ka iyo wakiilada tafaariiqda ayaa iyaguna door ku leh la-hawlgalayaasha socdaalka.
Heer ganacsi, waxaa jira qaar ka mid ah maamulayaasha oo sidoo kale shaaca ka qaaday wacyigelin la'aan la xiriirta joogtaynta. Shirkado badan oo ka kala socda warshado kala duwan ayaa saxeexay ololaha Qaramada Midoobay ee Race to Zero, iyaga oo ballan qaaday in ay qiiqayaan eber kaarboonka ugu dambayn 2050.
Golaha Socdaalka iyo Dalxiiska Adduunka ayaa si rasmi ah u daah-furi doona khariidaddiisa Net Zero Roadmap ee COP26. Qorshahan warshadaha, oo si jilicsan loo bilaabay horraantii Sebtembar, waxaa ku jiri doona qaab-dhismeedyo qaas ah oo loogu talagalay qaybo gaar ah oo ka mid ah nidaamka deegaanka safarka iyo dalxiiska, si ay uga caawiyaan dardargelinta ballanqaadkooda cimilada iyo dhimista qiiqa wakhtiga.
Laakiin markii WTM London ay waydiisay xirfadlayaasha ku saabsan in ganacsigoodu uu leeyahay istaraatijiyad rasmi ah oo ah "yaraynta kaarboonka" meesha, in ka badan afar-meeloodba (26%) way awoodi waayeen inay sheegaan haddii siyaasaddan ay jirto. In ka badan mid ka mid ah saddexdiiba (37%) ayaa sheegay in aanay jirin siyaasad meesha ku jirta.
36% ee soo hadhay waxa ay qireen in ay jirto siyaasad, laakiin 26% oo kaliya ayaa dhab ahaantii hirgaliyay siyaasadda. Tobankiiba hal qof oo safar ah ayaa qirtay in loo-shaqeeyahaagu uu leeyahay siyaasad dhimis kaarboon ah, taas oo aysan fulin.
Iyadoo ay jirto sawirkan isku dhafan, maamulayaashu waxay u muuqdaan inay u maleynayaan in socdaalku uu ka fiicnaanayo qaybaha kale marka ay timaaddo dhimista qiiqa gaaska aqalka dhirta lagu koriyo. Ku dhawaad ​​40% ayaa sheegay in socdaalku uu ka wanaagsan yahay qaybaha kale iyadoo 21% kaliya ay ka fikirayaan caksi. Qiyaastii afar-meeloodba (23%) waxay u arkaan dadaalka safarka mid la mid ah qaybaha kale, iyadoo 18% muunada aysan hubin sida safarku u socdo.
Simon Press, Agaasimaha Bandhigga, WTM London, ayaa yiri: "In kasta oo aan ku faaneyno dadaalka WTM ee tobanaan sano ah si uu u hoggaamiyo doodda ku saabsan dalxiiska waara oo mas'uulka ah, ma nihin kuwo ku qanacsan. Natiijooyinkani waxay muujinayaan in aan wali haysano dariiqo aan ku heli karno warshadaha si buuxda ula socda himilooyinkeena mustaqbalka dalxiiska oo waara oo mas'uul ah.
"Haddii ay jiraan, waxaan u baahanahay inaan ku qaylino xitaa si aad u dheer. Xaaladda degdegga ah ee cimiladu ma baxayso oo baahida loo qabo in la joojiyo kulaylka meeraha waa muhiim. Laakiin warshadaha socdaalku waxay sidoo kale u baahan yihiin inay si firfircoon uga qaybqaataan kor u qaadida kala-duwanaanta, isku-dhafka iyo faa'iidooyinka dhaqaale, haddii aan rabno dadweynaha safarka ah, dawladaha iyo maamulayaasha si ay u arkaan safarka iyo dalxiiska inay yihiin kuwo waxtar u leh, halkii ay ka ahaan lahaayeen wax la beegsado oo la canshuuro."